Akụkọ - Akara ọzọ maka PA 6.6 polymer base bidoro na Shanghai
US naịlọn ibu Invista (Wichita, Kansas; www.invista.com) kwuru na ọ gbasaawanye ikike ya maka polyamide 6.6 base polymer na Shanghai Chemical Industry Park (SCIP) site na 40,000 t / y. Ahịrị ọzọ agbakwunyere ọrụ ma na-eweta ikike zuru ezu na saịtị ahụ na 190,000 t / y, nke 30,000 ka a na-arụ ọrụ ya ebe ndị ọzọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu. N’afọ ole na ole gara aga, emeela ka nke abụọ gbasaa.
Dabere na onye isi mpaghara mpaghara Invista Angela Dou, ụlọ ọrụ US na-emeghachi omume na mmụba a tụrụ anya na ọchịchọ ụlọ. Esịtidem amụma na-ahụ ngwa dị ka akpakanamde, R & D, fechaa ewu na akpaaka dị ka ndị isi na-akwọ ụgbọala agha.
Ruo ugbu a, Invista na-emepụta hexamethylenediamine (HMD) dị na Shanghai, na mgbakwunye na PA 6.6. Kemgbe etiti 2020, ụlọ ọrụ ahụ na-arụkwa osisi maka ngwaahịa ADN dị n'etiti (lee Plasteurope.com nke 25.06.2020). Emebebere mmepụta ga-amalite na 2022 na ikike nke 400,000 t / y.